DLULA iBechech Baron 58 V2 X-Plane I-10 - iRikoooo
Usayizi 16.3 MB
Play 4 176
Indiza ehlongozwayo i-Beechcarft Baron 1990 ye-58. Le indiza ifakwe i-2 Continenetal IO-540 (300 hp), nezinjini ze-Bendix King kanye ne-autopilot kuhlanganise nomqondisi wendiza.
Gcwalisa ingaphandle neyaphakathi imodeli ye-3D eklanyelwe ku-Blender, ngezingxenye ezifakiwe embukisweni wangaphandle (Ukulawula izindawo, i-Flaps, okuningiliziwe kwezinto zokuhamba, ukuqondisa kwempumu, ukumiswa, nokuphawula kwenkomo)
Four ngopende izikimu kanye indlela yokwenza blank zifakiwe iphakethe.
2D panel nesiko zomculo. Zonke izinhlelo ifaniswe.
I-Cockpit ye-3D esebenzayo ngokugcwele futhi enempilo, ephathwe ngobuchwepheshe be-manipulators.